Arabia Saodita: Tena Ilaina Ve Ny Mpanampy An-trano? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Aogositra 2017 17:53 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, বাংলা, Español, Italiano, 日本語, عربي, English
(Marihina fa tamin'ny 15 Aogositra 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Hoy i Ahmed Baaboud raha namaritra ny zava-misy:
“Ry rahalahiko, mampiasà mpanampy an-trano ary ento mora. Aza mahidy, ary mitonia ary avelao hitony ihany koa ny vadinao. Makà mpanampy an-trano ary hihatsara ny fiainana.”
Niverimberina matetika tamin'ny mpiara-miasa iray tany am-piasana ny resaka etsy ambony. Mihevitra izy fa diso aho satria tsy manana mpanampy an-trano hanampy ny vadiko ary hikarakara an'i Joori, zanako vavy. Ny fanazavako dia hoe tsy miasa ny vadiko ary efa nifanaraka izany hatramin'ny voalohany izahay. Tsy hiasa izy raha mbola manan-janaka kely izahay. Ankehitriny bevohoka ny zanakay faharoa izy. Midika izany fa tsy miasa izy mandritra ny efa-taona farafahakeliny.. ary noho izany dia andraikiny ny tokantrano indrindra satria kely ny tranonay ary tsy manam-bahiny matetika izahay.
Efa ho telo taona izao i Joori. Mavitrika izy ary tiany ny milalao sy mihosona amin'ny ankizy hafa. Nanome tsiny ahy ny mpiara-miasa amiko satria tsy mitondra an'i Joori milalao eny amin'ny kianja filalaovana akaikin'ny tranonay aho. Hoy izy tamiko: “Raha maka mpanampy an-trano ianao dia izy no mitondra ny zazavavy kely any amin'ny kianja filalaovana, izay dia ampy!” Namaly aho fa mitondra an'i Joori any amin'ny dobo filomanosana sy any amin'ny tranomboky izahay rehefa zoma tolakandro, izay toerana hilalaovany sy hianarany miaraka amin'ny ankizy hafa. Ekeko fa tsy mitondra an'i Joori any amin'ny dobo filomanosana isan'andro aho na isan-kerinandro fa entinay any amin'ny trano famakiam-boky izy indray mandeha isaky ny roa herinandro eo. Tsy isalasalana fa sahirana aho, saingy heveriko fa tsy ny fananana mpanampy an-trano no vahaolana .
Manazava ny antony tsy hanaovany izany i Ahmed , ary manolotra vahaolana ho an'ny olana:
Heveriko fa andraikitry ny vehivavy ny raharaha an-tokantrano raha mbola tsy miasa izy ary indrindra fa raha kely ny trano. Ny fananana mpanampy an-trano miaina amin'izany toerana kely izany dia midika ny tsy fanananay fiainana manokana.. ao amin'ny tokantranonay! Toy izany koa ny momba an'i Joori. Moa ve lojika sy andraikitra ho ahy ny maka mpanampy an-trano mba hanao ny raharaha izay heveriko fa andraikitra fototry ny ray aman-dreny? Ny fandrindrana tsara kokoa ny fotoana toy ny famonoana ny fahitalavitra eo anelanelan'ny amin'ny 5 ora hariva ka hatramin'ny 8 ora hariva, na manao fandaharam-potoana hiarahan'ny fianakaviana ny vahaolana, na raha ho ahy manokana dia ny fandraisana anjara amin'ny fanaovana raharaha ao an-tokantrano, na ny fanaovana ny raharaha izay azoko atao .. na zavatra hafa.. kanefa hoy aho hoe tsy mila mpanampy an-trano aho (farafaharatsiny aloha amin'ny zava-misy ankehitriny). Ny fanontaniako dia hoe : diso ve aho?